राजनीति Archives - Page2of 243 - Rising Dainik
प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि गर्ने भए कमालः अब एमाले यसरी हुनेभयो झन् शक्तिशाली, माधव नेपाल पक्ष खुसीले गदगद !
May 7, 2021 May 7, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि गर्ने भए कमालः अब एमाले यसरी हुनेभयो झन् शक्तिशाली, माधव नेपाल पक्ष खुसीले गदगद !
काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ईतिहासकै चतुर नेपाली राजनीतिक खेलाडी भनेर विश्लेषकहरुले टिप्पणी गर्दै आएका छन् । यतिबेला नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ । पार्टीलाई फुटबाट जोगाएर आफू पनि प्रधानमन्त्री पदमा टिकिरहन र आफ्नै नेतृत्वको सरकार अगाडी बढाउन प्रम ओलीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् । यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को कमाल गर्ने तयारी गरेको […]
जित्ने सुनिश्चितता भए मात्र गृहमन्त्री थापा राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्ने
May 6, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on जित्ने सुनिश्चितता भए मात्र गृहमन्त्री थापा राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार बन्ने
काठमाडौँ / कपा एमालेले बागमती प्रदेशबाट रिक्त राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई उम्मेदवार बनाउनु पूर्व जित सुनिश्चितता भएपछि मात्र टुंगोमा पुग्ने निर्णय गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनले एमाले पृष्ठभूमिका खिमलाल देवकोटालाई साझा उम्मेदवार बनाएपछि एमालेले थापालाई उम्मेदवार बनाउनु अघि थप आन्तरिक गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीवार बसेको एमाले स्थायी […]
एमालेका २२ सांसदले ओलीलाई भोट नहाल्ने ! को-को छन् ? नामावलीसहित
May 6, 2021 May 6, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on एमालेका २२ सांसदले ओलीलाई भोट नहाल्ने ! को-को छन् ? नामावलीसहित
काठमाण्डौ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही बैशाख २७ गते संसदमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुअगावै नेकपा एमालेका केही प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु भने राजीनामा दिन लागेका छन् । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरु राजिनामा दिन लागेका हुन् । उनीहरुले हिजो बुद्धनगरमा […]
ओलीको साथमा लागेका बादलसँग प्रचण्डले यसरी लिए बदला !
May 6, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on ओलीको साथमा लागेका बादलसँग प्रचण्डले यसरी लिए बदला !
काठमाडौँ / राष्ट्रियसभाको रिक्त एक सिटका लागि आगामी जेठ ६ गते हुन लागेको उपनिर्वाचनमा एमाले-एमालेबीच भिडन्त हुने भएको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले रामबहादुर थापा ‘बादल’ लाई उम्मेदवार बनाएको छ भने माओवादीले एमाले निकट बुद्धिजीवी एवं संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । वाम बुद्धिजीवी देवकोटालाई माओवादी, नेपाली काँग्रेस र […]
सभामुख सापकोटाको कोरोना रिपोर्ट आयो
May 6, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on सभामुख सापकोटाको कोरोना रिपोर्ट आयो
काठमाण्डौ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही वैशाख २७ गते हुने संसद्को विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत लिने तयारी गरेपछि सांसदहरु, सभामुख, सचिवालयका कर्मचारी लगायतको कोरोना परीक्षण गरिएको छ । परीक्षणका सिलसिलामा गरिएको कोरोना पिसिआर परीक्षणमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र उनको सचिवालयका सबैको नेगेटिभ रिपोर्ट प्राप्त भएको छ । परीक्षणमा प्रतिनिधिसभाका चार सदस्य र र दुई कर्मचारीको […]
फेरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै , ओलीले चाले यस्तो कदम
May 6, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on फेरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदै , ओलीले चाले यस्तो कदम
काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट आफूले विश्वासको मत पाउन नसके फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने संकेत गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूसँग बुधबार भएको छलफलमा ओलीले निर्वाचनमा मिलेर जान प्रस्तावसमेत गरे । कांग्रेसले विश्वासको प्रस्ताव असफल बनाउने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट बुधबार ओली सहयोगीहरूका साथ देउवा निवास बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए । […]
माधव पक्षका सबै सांसदको राजीनामा , भयो यस्तो सहमति
May 6, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on माधव पक्षका सबै सांसदको राजीनामा , भयो यस्तो सहमति
काठमाडौँ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीवि’रुद्धको गठबन्धनले एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल समूहका सांसदको राजीनामा र अविश्वास प्रस्ताव सँगसँगै हुने गरी छलफल अघि बढाएको छ । ओलीले २७ गते विश्वासको मत नपाए अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्दै चुनावसम्म जाने रणनीति बनाएको आकलन गरिएकाले त्यसलाई चिर्न अगाडि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने गरी छलफल अघि बढेको स्रोतले जनाएको […]
ओलीको खेल ख’त्तम , महन्थको हस्तक्षर अभियाननै रोकियो ! किन रोकियो हस्ताक्षर ?
May 6, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on ओलीको खेल ख’त्तम , महन्थको हस्तक्षर अभियाननै रोकियो ! किन रोकियो हस्ताक्षर ?
काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सघाउनका लागि सुरु गरेको हस्ताक्षर अभियान आफ्नै गुटभित्र अल्पमतमा पर्ने सं’केत देखिएको छ । महन्थ ठाकुर पक्षकै नेताहरुमा अन्तरविरोध देखिएपछि ठाकुरको अभियानमा ‘ब्रेक’ लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मतमा सघाउनुपर्ने अध्यक्ष ठाकुरको अभियानमा साथ दिइरहेका जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र […]
आफ्नालाई का’रवाही गरेर ओली कांग्रेसको शरणमा पुगेपछि भीम रावलले खोले फायर, यतिसम्म भने !
May 6, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on आफ्नालाई का’रवाही गरेर ओली कांग्रेसको शरणमा पुगेपछि भीम रावलले खोले फायर, यतिसम्म भने !
काठमाडौँ / नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री भीम रावलले प्रधानमन्त्री एवम् आफ्नै पार्टी अध्यक्षमाथि रोस प्रकट गरेका छन् । नेता रावलले विपक्षी दलसँग सत्ता सहकार्यको परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घृणित राजनीति गरेको आ’रोप लगाएका हुन्। रावलले बिहीबार ट्वीटमार्फत एमालेका आफ्नै सांसदलाई का’रवाही गरेर विपक्षी दलसँग समर्थन गर्न अनुनय विनय गर्नु अनैतिक र गैरजिम्मेवार […]
स्थायी कमिटीको आ’कस्मिक बैठकमा यस्तो निर्णय गरेर शितल निवास हा’न्निए प्रधानमन्त्री ओली
May 6, 2021 May 6, 2021 Ramash KunwarLeaveaComment on स्थायी कमिटीको आ’कस्मिक बैठकमा यस्तो निर्णय गरेर शितल निवास हा’न्निए प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौँ / केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक सकिएको छ। बैठकपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतल निवास गएका छन्। अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबीच छलफल जारी छ। स्रोतका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घ’टनाक्रमबारे जानकारी दिन प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्न पुगेका हुन्। एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदको विशेष […]